कति बजे छ यसबर्ष भाइटीकाको शुभ साइत ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कति बजे छ यसबर्ष भाइटीकाको शुभ साइत ?
कति बजे छ यसबर्ष भाइटीकाको शुभ साइत ?
कात्तिक ३ गते, २०७६ - १५:४६
समितिले तिहारका विभिन्न पर्वको निर्णय गर्दै भाइटीकाको साइत सार्वजनिक गरेको अध्यक्ष प्राडा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए । कात्तिक १२ गते मङ्गलबार बिहान ११ः५५ बजे भाइटीकाको साइत उत्तम रहेको उनले बताए।
गाई, गोरु र आत्म९म्ह० पूजा भने कात्तिक ११ गते सोमबार गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन रहेको छ । ११ गते बिहान ९ः४३ बजेसम्म औँशी तिथि पर्दछ । त्यसपछि कात्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारम्भ हुने भएकाले आत्म९म्ह० पूजा यसै दिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कात्तिक ३ गते, २०७६ - १५:४६ मा प्रकाशित